Tababar Loo Hayay Xirfadlayaal Caafimaad Oo Lasoo Gunaanaday - Cakaara News
Tababar Loo Hayay Xirfadlayaal Caafimaad Oo Lasoo Gunaanaday
Jigjiga(cakaaranews)Arbaco 2da November 2016.Tababar uu soo agaasimay xafiiska caafimaadka DDSI laguna tababarayay xirfadlayaasha caafimaadka oo tiradoodu kabadantahay 100 xirfadle islamarkaana kakala yimid degmooyinka gobolka faafan ayaa lagu soo gabagabeeyay hoolka shirarka ee kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI.
Hadaba, xidhitaankii tababarkan yaa waxaa ugu horayn kahadlay wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI Mudane Xasan Ismaaciil Cali oo sheegay in tababarkani yahay tababar isku dhaf ah oo lagu dhisayo aqoonta xirfadlayaasha fidinta caafimaadka ee ku aadan ka hortaga iyo xakamaynta cudurka HIV AIDS, Qaaxada iyo waliba cudurkaa juudaanka. Wuxuuna tilmaamay wasiirku in tababarkani yahay mid isku xidhaya dhamaan xarumaha iyo ruguha caafimaadka DDSI laguna dardar galinayo shaqooyinka caafimaadka u yaala
Ugudanbayna wuxuu dardaaran usoojeediyay dhamaan shaqaalaha caafimaadka inay kaalin mugleh kaqaataan kamidho dhalinta barnaamijkan lagu xakamaynayo cudurada. Wuxuuna xusay haayadaha bah wadaagta la ah xafiiska in tababarkii sidii larabay uu u hirgalay islamarkaana ay muhiim tahay in doorka kaga aadan ay ka qaataan natiijo ka keenida tababarka.
Iskusoowada duuboo tababarkan ayaa laga wada bilaabay dhamaan gobolada DDSI iyadooy kafaa’iidaysanayaan xirfadlayaal toradoodu dhantahay 1060 xubnood.Waxaana lafilayaa in natiijo wax ku ool ah laga keeno xakamaynta cudurka HIV AIDS, cudurka juudaanka iyo waliba